Avotra soa aman-tsara ilay tovovavy…: maty voatifitra teo amin’ny lohany ilay mpaka an-keriny | NewsMada
Par Taratra sur 30/04/2021
Natondron’ilay jiolahy tamin’ireo polisy saika hisambotra azy ny vavabasy teny aminy. Ny an’ireto farany anefa no tonga aloha. Voatifitra teo amin’ny lohany ity saika hanao “kidnapping” tovovavy iray ka lavo teo. Efa jiolahy nokarohina noho ny fanafihana mitam-piadiana ity saika hanao ny nataony, tao Beantana, Toliara, omaly ity.
Lavon’ny balan’ny polisy ny alarobia alina teo ny jiolahy iray nanao naka an-keriny vehivavy iray tao an-tranony tao Betania-Toliara. Niantso ny mpitandro filaminana ny raim-pianakaviana tao an-toerana. « Nilaza izy fa misy manao takalon’aina ny zanany vavy ary ambenan’ilay lehilahy amin’ny basy », hoy ny fanazavan’ny polisim-pirenena, loharanom-baovao. Nidina teny an-toerana voalaza avy hatrany ny polisy tokony ho tamin’ny 09 ora alina. Nanambana basy avy hatrany anefa ilay lehilahy vao nahita ireo polisy niditra ilay trano. Voatery nitifitra ny mpitandro filaminana ka voa teo amin’ny lohany ilay jiolahy. Vokany maty tsy tra-drano izy raha avotra soa aman-tsara kosa ilay vehivavy 25 taona natao takalon’aina. Arak’izany, azo teny an-tanàn’ilay olon-dratsy io ny basy poleta nampiasainy.
Fantatra tao anatin’ny fanadihadiana fa tsy nety niaraka tamin’io jiolahy manodidina ny 30 taona io ilay vehivavy mpianatra nalaina an-keriny. Antony nanaovan’io lehilahy io ny asa ratsiny sy saika hamonoany azy. Isan’ireo jiolahy raindahiny ity lavo ity noho izy efa notadiavin’ny polisy ao an-toerana. Tafiditra ho isan’ireo olon-dratsy mpanao fanafihana mitam-basy ao Toliara izy.